Mkpọtụrụ Web Crawler Na Nchekwa Ihe Nchekwa Maka Ntugharị WordPress
Ntucha bụ ihe mgbakwunye WordPress nke nwere ike idetuo data site na ụdị niile nke saịtị gị WordPress website dị ka ọtụtụ ugboro dị ka ị chọrọ. Ọ nwekwara ike biputere ọdịnaya na blog gị na akpaghị aka.
Ngwaọrụ a na-arụsi ọrụ ike karịa ihe ka ukwuu n'ime ngwanrọ data , ọ nwekwara ọtụtụ atụmatụ ndị dị elu, ma ihe kachasị mkpa bụ ndị e depụtara n'okpuru:
Ntucha dị mfe iji ma ọ dịghị achọ ihe ọ bụla mmemme ma ọ bụ ahụmahụ - site web gestion des ressources humaines au. N'eziokwu, a haziri ya maka ezigbo ahụmahụ ọrụ. Ịdịghị mkpa API ọ bụla. Naanị ị chọrọ ịhazi oge ịchọrọ gị, ọ ga-arụ ọrụ na autopilot 24/7 dị ka robot.
Ọ na-arụ ọrụ nke kachasị mkpa, yabụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị niile na-enye ọrụ na-akwado ya. Ọzọkwa, ọ na-adị njikere mgbe nile ịga. Ọ dịghị achọ nhazi ọ bụla.
Ngwa nwere ike ijikwa ọdịnaya sitere na weebụsaịtị ndị ọzọ na-enweghị oke ọ bụla na otu ọsọ. Ọ ga-abara gị uru ma ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụ ọdịnaya site na 100 ibe weebụ kwa ụbọchị. Nanị ihe ị ga-eme bụ ịtọ ya otu ugboro, na nke ahụ niile. The bot ga-anọgide na-arụ ọrụ 24/7 na ndabere. Ebe nrụọrụ weebụ gị ga-abụ nke ọ bụla.
Ikike ịdekọ ọdịnaya na blog gị
Akụkụ ọzọ pụtara ìhè nke ngwa mgbakwunye a bụ ikike ọkpụkpọ nchịkọta ọdịnaya ma debe ya na blog gị dabere na ntụziaka gị. Nke a bụ ya mere ọ nwere ọtụtụ nhọrọ ntanetịime akpaaka. Ọ bụrụ na ị nwere ndị na-aga na blog gị mgbe niile maka ozi, na ngwá ọrụ a, a ga-emelite blog gị mgbe ọ bụla ị chọrọ.
Ọ na-akwado ụdị ngwaọrụ ọ bụla
A ga-eji ihe omume a na ngwaọrụ ọ bụla. Ị nwere ike ịnweta akara ngosi gị na ama gị, mbadamba, na ọbụna PC gị. Na ya, ị nwere ike wepu ọdịnaya na ịga.
O nwere ikike iji wepụ ihe edere site na ihe oyiyi
Mgbe ụfọdụ, ụfọdụ ihe oyiyi nwere ederede agbakwunyere n'ime ha dịka akara. Dịka ọmụmaatụ, iji gbochie ịkwapu ọdịnaya, ụfọdụ saịtị na-akpọ ihe oyiyi ha niile. Ntucha nwere ike wepụ ihe oyiyi ahụ ma wepụ ihe ederede niile na ya.
Nkọwa nke mgbakọ na mwepụ
Mgbe ọ nyesịrị data mgbagwoju anya, o nwere ike ịrụ ụfọdụ mgbakọ na mwepụ na ha, ọ pụkwara igosi nsonaazụ. Nke a ga - enye aka ịmepụta ọnụ ọgụgụ dị mma. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ gị gosipụtara ọnọdụ ahịa ugbu a, ị nwere ike ị gbakọọ ma gosipụta ọnụọgụ pasent ma ọ bụ belata na uru nke ngwaahịa ndị ahịa gbanwere.
Ya mere, nanị ị ga-achọ ịkọwa ya maka ngwa mgbakwunye ahụ, ọ ga-emepụta ọ bụghị naanị na-enyocha ọnụ ahịa ọhụrụ ma gbakọọ ma gosipụta mgbanwe pasent.
Mkpakọrịta na ihe nchọgharị niile
Ọ dakọtara na ihe nchọgharị niile dị ka Microsoft Edge, Google Chrome, Safari, na Mozilla Firefox. Ị gaghị enwe ihe ọ bụla nwere nkwado.
Mmelite na-adị kwa ụbọchị
N'agbanyeghị ọkwa ya, ọ na-emelite ya mgbe niile. A malitere ya na November 23, 2016, e meela ya ugboro ugboro. N'ezie, oge ikpeazụ ọ na - emelite bụ 23 nke Ọktoba, 2017.
N'ikpeazụ, ngwa mgbakwunye ga-adaba maka ọtụtụ ihe eji eme ihe. Ụfọdụ n'ime okwu ndị a bụ:
Nkọchapụta ozi ego ọhụrụ;
Nkọcha nke ihu igwe ihu igwe kachasị ọhụrụ;
nchịkọta nke nchịkọta ọrụ na-enweghị isi;
Nkọcha ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ọnọdụ ha;
Iwepụta ihe ọmụma na ọdụ ụgbọelu na usoro njem ụgbọelu ha;
N'eziokwu, enwere ike iji ya rụọ ọtụtụ ọrụ nchọta. Ọrụ ndị e depụtara n'elu bụ naanị ntakịrị ntakịrị nke ihe ọ ga-ejide. Ọ dịkwa mkpa ịkọwa eziokwu ahụ bụ na atụmatụ niile akọwapụtara n'elu abụghị naanị atụmatụ nke Scrapes. Ya mere, gbalịa ngwa ngwa a taa, ma ị nwere ike ọ gaghị achọ ihe ọ bụla ọzọ nchịkwa weebụ ọzọ!